Isethaphu ye-Sonoelectrochemistry - 2000 Watts Ultrasound
I-Sonoelectrochemistry ihlanganisa izinzuzo ze-electrochemistry ne-sonochemistry. Inzuzo enkulu kulezi zindlela kulula kwazo, izindleko eziphansi, ukukhiqiza kabusha nokukhula. I-Hielscher Ultrasonics inikeza ukusethwa okuphelele kwe-sonoelectrochemical yebatch nokusetshenziswa okusemgqeni. Siqukethe:
i-generator ye-ultrasonic esezingeni eliphakeme (ama-watts angama-2000) ane-auto-tuning, isilawuli se-amplitude nokungena kwedatha okuyinkimbinkimbi,
i-transducer enamandla enophondo lwe-ultrasonic (ibanga lezimboni, 2000 watts, 20kHz),
i-insulator kagesi enganciphisi ukunyakaza kwe-ultrasonic
izimpondo ze-ultrasonic booster zokukhulisa noma ukwehla kwe-amplitude
imiklamo ehlukahlukene ye-sonotrode (I-sonotrode yi-electrode. I-Cathode noma i-anode.)
flow cell reactor enezindonga zamaseli eziguquguqukayo (i-aluminium, insimbi engagqwali, insimbi, ithusi, …)
Awudingi ukuchitha isikhathi sakho ukuthuthukisa ukusetha kwakho ukuze ukwazi ukuhlanganisa i-ultrasound ne-electrochemistry. Awudingi ukwenza ukuguqulwa kukagesi kwimishini ejwayelekile ye-ultrasound. Thola lokhu kusethwa kwe-sonoelectrochemistry yezimboni futhi ugxile emizamweni yakho nesikhathi kucwaningo lwakho lwamakhemikhali futhi usebenzise inqubo!
Qedela ukusethwa kweSonoelectrochemical nge-Flow Cell Reactor
Ilungele ukusebenzisa ukusethwa kwe-Sonoelectrochemistry
I-Hielscher Ultrasonics inikeza ukusethwa okulula kokusebenzisa i-sonoelectrochemical nge-adaptable adaptable, ukumisa okuguqukayo. Lokhu kusetha kufanelekile ekucwaningeni okujwayelekile nasekuthuthukiseni nasekusebenziseni inqubo kanye nokukhiqizwa kwesikali esiphakathi. I-sonotrode ese-UIP2000hdT (2000 watts, 20kHz) ingasetshenziswa njenge-electrode ekusetheni iqoqo noma emgqeni oneseli lokugeleza. Inomklamo oyingqayizivele wokuhlukaniswa kagesi. Ukuthuthuka kwe-sonoelectrochemical transducer akwehlisi amandla e-ultrasonic.
I-sonotrode / i-electrode ejwayelekile ibanga le-5 titanium futhi yakhelwe ukwengeza ukufana kokuqina kwe-ultrasonic eceleni kwayo. Eminye imiklamo nezinye izinto ezifana ne-aluminium, insimbi noma insimbi engagqwali iyatholakala. Isiphenduli esikhethekile sokugeleza kwamaseli salo mklamo sinomzimba we-aluminium ofakwe ngogesi ngokuxhuma kwepulasitiki emaphethelweni womabili. Iphrofayili ye-aluminium ingasetshenziswa njenge-electrode yomhlatshelo wezindleko eziphansi futhi ingashintshwa kalula ngezinye izinto ezifana nensimbi, insimbi engagqwali noma ithusi. Amanye amadayimitha weseli noma amadizayini ayatholakala. Iseli emdwebeni linegebe elilinganiselwa ku-2-4 mm phakathi kwe-electrode ye-ultrasonic nomzimba weseli. Ngakho-ke amagagasi e-ultrasonic abangela ukusakazwa kwe-acoustic kanye ne-cavitation emzimbeni weseli futhi. Zonke izinto ezijwayelekile zalomklamo ziyatholakala ezinqolobaneni zethu eJalimane nase-USA. Vele ungasebenzisa ukusetha okufanayo kwazo zonke ezinye izinqubo ezingezona ezikagesi ze-ultrasonic ne-sonochemical. Lokhu kusetha kusebenza nezinqubo ezisekelwa yi-ultrasound ezinamapulse aphezulu kagesi (HEP).
Izingxenye zebanga le-Advanced Industrial
I-UIP2000hdT isetshenziswa ngamakhasimende amaningi ukuvala igebe phakathi kokuhlolwa kwebhentshi nokukhiqizwa. Zonke izinsimbi ze-Hielscher zenzelwe ukusebenza ngokuqhubekayo – 24h / 7d / 365d. I-UIP2000hdT ifakwe i-touch screen, i-ethernet interface, i-24/7 Excel ehambisanayo yokulandelwa kwe-CSV ekhadini le-SD kanye ne-thermocouple yokuqapha izinga lokushisa. Ungalawula i-UIP2000hdT ngesiphequluli sakho. Inzwa yokucindezela yedijithali exhuma ku-UIP2000hdT iyatholakala. I-UIP2000hdT ingakukhombisa amandla wangempela wenetha ku-electrode. Lawa angamandla we-ultrasonic mechanical ku-liquid. Lokhu kukuvumela ukuthi ubheke futhi uqinisekise njalo ngomzuzwana we-sonication, isb wokulawulwa kwenqubo noma ukwenza kahle. Amadivayisi we-Ultrasonic avela ku-Hielscher ahlinzeka ngemiphumela yokuzala futhi ephindaphindekayo. Ungakwazi ukukala imiphumela yakho ngokuqonde ezingeni lokukhiqiza. Vele iqembu lezobuchwepheshe laseHielscher lizokuxhasa ekumiseni izivivinyo ezilungile kanti iHielscher izosebenzisana nawe ukwenza inqubo yakho isebenze.
Lokhu kusethwa kwe-sonoelectrochemistry akushiyi okuningi ongakufisa. Ukuphela kwento esele ingase ibe i-UIP2000hdT yesibili njenge-electrode yesibili.
Uma ungumuntu omusha kuleli gatsha le-chemistry, uzothola eminye imininingwane nge-sonochemistry, electrochemistry kanye ne-sonoelectrochemistry ngezansi.
I-Sonochemistry + Electrochemistry = I-Sonoelectrochemistry
I-Sonoelectrochemistry iyinhlanganisela ye-electrochemistry ne-sonochemistry.
I-Electrochemistry ingeza ugesi kumakhemikhali womzimba. Kuyindlela ethuthukile yokusebenzisa ama-reagents noma ama-reactants ngokudlulisa ama-electron. Inika amandla ukuguqulwa kwamakhemikhali okuhlosiwe, okukhethiwe. I-Electrochemistry yinto ebonakalayo.
I-Sonochemistry ingeza ukugeleza kwe-acoustic kanye ne-cavitational namandla wokwenza ukusebenza kwamakhemikhali. Indlela ebaluleke kakhulu ku-sonochemistry yi-cavitation. Ukuwa kwamabhamuza e-cavitation ensimini ye-ultrasonic kudala izindawo ezishisayo zasendaweni ezinezimo ezimbi kakhulu, njengamazinga okushisa angaphezu kuka-5000 Kelvin, izingcindezi ezingafika kuma-atmospheres ayi-1000 namajethi wamanzi afinyelela kumakhilomitha ayi-1000 ngehora. Lokhu kuthuthukisa ukusabela kwama-electrochemical ebusweni bama-electrode.
I-Sonoelectrochemistry ihlanganisa amasu amabili ashiwo ngenhla ngokusebenzisa i-ultrasonication kusethingi lwe-electrochemical. I-Ultrasound ithonya imingcele ebalulekile ye-electrochemical kanye nokusebenza kahle kwezinqubo zamakhemikhali. Isixazululo se-electrochemical noma i-hydrodynamics ye-electroanalyte esitokisini se-electrochemical sithuthukiswa kakhulu ngokuba khona kwe-ultrasound. Ukuhlanganiswa kwe-electrode nophondo lwe-ultrasonic kunemiphumela emihle emsebenzini we-electrode surface kanye nephrofayili yokuhlushwa yezinhlobo ze-electroanalyte kuseli lonke. Imiphumela ye-Sonomechanical ithuthukisa ukuthuthwa ngobuningi kwezinhlobo ze-electrochemical kusuka kusixazululo senqwaba kuya ku-electroactive surface. I-electrode ye-ultrasonic inciphisa ukushuba kwesendlalelo se-diffusion ebusweni be-electrode, inyusa ukushuba kokufakwa kwe-electrode / i-electroplating, inyusa amazinga we-electrochemical, isivuno nokusebenza kahle, ikhulisa i-porosity nobulukhuni bokufakwa kwe-electrode, ithuthukisa ukususwa kwegesi kuzisombululo ze-electrochemical; ihlanza iphinde ivuselele indawo engaphezulu kwe-electrode, inciphise amathuba amaningi we-electrode, ngokususwa kwensimbi nokususwa kwe-bubble yegesi ebusweni be-electrode (okubangelwa yi-cavitation nokugeleza kwe-acoustic), futhi kucindezela ukungcola kwe-electrode. Izicelo ze-sonoelectrochemistry zifaka i-electropolymerization, i-electrocoagulation, i-organic electrosynthesis, i-electrochemistry yezinto ezibonakalayo, i-electrochemistry yezemvelo, i-chemistry ye-electroanalytical, ukukhiqizwa kwe-hydrogen nokufakwa kwe-electrode.
Ilungele ukusebenzisa i-Ultrasonic Equipment yezinqubo ze-Sonoelectrochemical
I-Sonoelectrochemistry ku-Flow Chemistry Izicelo
Uma wenza izinqubo ze-sonoelectrochemical ekusethweni kokugeleza, ungalungisa isikhathi sokuhlala sokuphendula kwe-sonoelectrochemical ngokushintsha isilinganiso sokugeleza. Ungakwazi ukuphindaphinda ukuze uveze okuphindaphindiwe noma upompe ngeseli kanye. Ukuphinda ujikeleze kungaba lusizo ekulawuleni izinga lokushisa, isb. Ngokugeleza kusetshenziswa umzimba wokushisa ukupholisa noma ukufudumeza.
Uma usebenzisa i-valve yangemuva yokucindezela lapho kuphuma khona i-sono-electrochemical cell reactor, ungakhuphula ingcindezi ngaphakathi kweseli. Ingcindezi engaphakathi kweseli iyipharamitha ebaluleke kakhulu yokuqinisa i-sonication kanye nomthelela ekukhiqizeni izigaba zegesi. Kubalulekile futhi lapho usebenza nama-reactants noma imikhiqizo enephuzu elibilayo eliphansi.
Ukusebenza kumodi yokugeleza kuvumela ukusebenza okuqhubekayo ngakho-ke ukukhiqizwa kwamavolumu amakhulu.
Uma okokusebenza kugeleza phakathi kwama-electrode amabili, isb. Sonotrode nodonga lweseli, unganciphisa ibanga phakathi kwama-electrode. Lokhu kuvumela ukulawula okungcono kwenani lama-electron adlulisiwe nokukhethwa okungcono kokuphendula. Lokhu kungathuthukisa ukunemba komkhiqizo, ukusatshalaliswa nokuvunwa.
Ngokuvamile, ukusabela kwe-sonoelectrochemical ku-flow cell reactor setting kungashesha kakhulu kunokuphendula kwe-analog kunqubo ye-batch. Ukusabela okungathatha kuze kufike emahoreni ambalwa kungaqedwa ngemizuzu eminingana, kukhiqizwe umkhiqizo ongcono.